China 55 HRC Carbide 3 Flute Roughing End Mill yabavelisi bealumum kunye nabathengisi | Mingtaishun
I-55 ye-HRC Carbide 3 Mill Floughing End Mill yealumum
Umongameli kunye nawo onke amalungu enkampani angathanda ukubonelela ngeemveliso zobungcali kunye neenkonzo kubathengi kwaye amkelekile ngokunyanisekileyo kwaye asebenzisane nabo bonke abathengi bomthonyama nabangaphandle belikamva eliqaqambileyo.
Ukuza kuthi ga ngoku, sinabathengi abavela kwihlabathi liphela, kubandakanya i-USA, iRussia, iSpain, i-Itali, iSingapore, iMalaysia, iThailand, iPoland, iIran neIraq. Umsebenzi wenkampani yethu kukubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni ophezulu ngexabiso elifanelekileyo. Sijonge phambili ekwenzeni ishishini nawe!
I-MTS-3 * 8 * 3 * 50 3 9 3 50 3 0
I-MTS-4 * 10 * 4 * 50 4 12 4 50 3 0
I-MTS-5 * 13 * 5 * 50 5 15 5 50 3 0
I-MTS-6 * 15 * 6 * 50 6 18 6 50 3 0
I-MTS-8 * 20 * 8 * 60 8 24 8 60 3 0
I-MTS-10 * 25 * 10 * 75 10 30 10 75 3 0
I-MTS-10 * 40 * 10 * 100 10 40 10 100 3 0
I-MTS-12 * 30 * 12 * 75 12 30 12 75 3 0
I-MTS-12 * 45 * 12 * 100 12 45 12 100 3 0
I-MTS-14 * 45 * 14 * 100 14 45 14 100 3 0
I-MTS-16 * 45 * 16 * 100 16 45 16 100 3 0
I-MTS-18 * 45 * 18 * 100 18 45 18 100 3 0
I-MTS-20 * 45 * 20 * 100 20 45 20 100 3 0
2.Yalelwe: AlTiN, TiAlN, TiAISI, TiSiN, TiN, DLC, Nano, Diamond
3.Ingasetyenziselwa ukuqhubekeka kweplastiki, ukhuni, iAluminium.copper, intsimbi yentsimbi, intsimbi yekhabhoni, isinyithi sokubumba, intsimbi engenasici, itayitanium alloy, isixhobo sesinyithi kunye nentsimbi ephathwe bubushushu
1.Ukusika okukhethekileyo: Umda wokusika okhethekileyo unokwandisa amandla okusika. Ixesha lokuphila lezixhobo noomatshini liya kuba lide
2.Smooth kunye nembande ebanzi: Imbande egudileyo nebanzi izakususa ukusikwa ngokulula.
Ukutyabeka okunganyangekiyo: Ngobushushu obunokumelana nobushushu be-HELICA, bunokusetyenziselwa ukulungiswa kwesantya esiphezulu
4.ukutyabeka orenji: Phantsi ukutyabeka orenji, nayiphi na lingonakali kulula ukwamkelwa
Umgangatho ophezulu we-5. Izinto eziluhlaza zisetyenziselwa ubunzima obuphezulu, ubungakanani bekhabhon tungsten.
Unyango umphezulu olukhazimlisiweyo: Ngonyango oluphezulu oluphezulu oluphezulu, ukunciphisa ukungqubana kokungqubana kungancitshiswa, ukusebenza kwe-lathe kungaphuculwa, ixesha lokuvelisa elinokugcinwa
Ngoku, sinikezela abathengi ngobuchule iimveliso zethu eziphambili Kwaye ishishini lethu ayisiyiyo "ukuthenga" kunye "nokuthengisa" kuphela, kodwa kugxila kokunye. Sijolise ekubeni ngumthengisi wakho othembekileyo kunye nomsetyenzana wexesha elide e-China. Ngoku, sinethemba lokuba ngabahlobo kunye nawe.
Sineqela lokuthengisa, banobuchwephesha kunye neenkqubo zokuvelisa, banamava eminyaka kwintengiso yorhwebo lwangaphandle, kunye nabathengi abakwaziyo ukunxibelelana ngaphandle komthungo kunye nokuqonda ngokuchanekileyo iimfuno zokwenyani zabathengi, ukubonelela abathengi ngeenkonzo ezizenzele kunye neemveliso ezizodwa.
Iimveliso zethu zamkelwe ngokubanzi kwaye zithembekile kubasebenzisi kwaye zinokuhlangabezana ngokuqhubekayo nokuphuhlisa iimfuno zoqoqosho nezentlalo. Siyabamkela abathengi abatsha nabadala abasuka kuzo zonke iinkalo zobomi ukuba banxibelelane nathi kubudlelwane kwezoshishino kwixesha elizayo kunye nokufezekisa impumelelo efanayo!
Kwinkulungwane entsha, sikhuthaza umoya weshishini lethu "simanyene, sikhuthele, sisebenza ngokukuko, sitsha", kwaye sinamathele kumgaqo-nkqubo wethu "ngokusekwe kumgangatho, ube ngumtsalane, uqhankqalaze uphawu lodidi lokuqala". Siza kuthatha eli thuba libalaseleyo ukudala ikamva eliqaqambileyo.
Egqithileyo I-55 yeHRC khabhide 2 ubude bemigangatho yebhola yepumlo yokuphela kweealum
Okulandelayo: 55 I-HRC Carbide 3 Iifreyithi eziMiselweyo zokuPhela zoMgangatho weAluminiyam
I-55 ye-HRC 2 Iimbande zentsimbi yeempumlo zeMpumlo
I-55 ye-HRC Carbide 3 yoLungiso loMgangatho oPheleleyo ...